के भा को हाम्रो परराष्ट्र ? जनताको निधनमा बधाई, फेरी केपी ओलीलाई राष्ट्रपति बनायो ! « The News Nepal
के भा को हाम्रो परराष्ट्र ? जनताको निधनमा बधाई, फेरी केपी ओलीलाई राष्ट्रपति बनायो !
काठमाडौ । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले फेरि अन्तराष्ट्रिय रुपमा बेइज्जत गराएका छ । यस भन्दा पहिले इन्डोनेशियमा सुनामीमा परेर मृत्यु भएका परिवारलाई हार्दिक श्रदाञ्जली हुनुपर्ने ठाउँमा हार्दिक बधाई लेखेर आलोचनाको शिकार भएको नेपालमाथि अर्को विपत्त आइलागेको छ । खासमा भएको के भने हिजो भारतका लागि नेपाली राजदुत निलाम्बर आर्चायले भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दसँग भेट गर्नुभएको थियो ।
झण्डैं दश मिनेट जत्ति भएको भेटमा दुई देशका बिचमा रहेको सम्बन्ध र सहयोगको बारेमा चर्चा भएको थियो । यो सँगैं राजदुत आर्चायले भारतीय राष्ट्रपतिलाई नेपालका तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सन्देश प्रदान गर्नुभएको थियो ।
भेट पछि भारत स्थित नेपाली दुतावासले एक वक्तव्य जारी गरेको छ जसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि राष्ट्रपति भनेर सम्बोधन गरिएको छ ।यसको अहिले सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । नेपालले पटकपटक अन्तराष्ट्रिय रुपमा गर्ने यस्ता गल्तीहरुबाट पाठ सिक्नुको सट्टा एउटैं कुरालाई पटकपटक दोहोर्याउँदैं जाँनु उचित हुँदैन । यो कुटनैतिक मर्यादामा गम्भीर त्रुटी हो । कर्मचारीहरुमा कपी, पेष्ट गर्ने प्रवृति बढेका कारण यस्तो भइरहेको छ ।